BASBAAS KULUL: SII KORDHAYA LAGA BILAABO ABUUR, GOORTA AY TAHAY IN LA BEERO, SIDA LOO KORO GEEDO WANAAGSAN, DARYEEL KA DIB BIQILKA - BEER CAGAARAN
Ka fikir basbaas kulul: sii kordhaya abuur, markaad guriga ku beertid, daryeesho geedo
Qashin ama basbaas kulul waa xawaashka asalka ah, taas oo siinaysa wax gaar ah oo hilibka iyo khudaarta cagaaran. Waxaa lagu daraa suugo, qasacadaysan oo la qalajiyey. Waxaad ku kori kartaa basbaaska quruxda badan ee beerta, aqalka dhirta lagu koriyo iyo xataa guryaha.
Dhuxulo leh duurka u hoggaansan ayaa qurxin doona loggia ama xayawaanka daaqada. Marka aad dooranayso noocyada kala duwan ee daryeelka iyo daryeelka taxadar leh, goosashada wanaagsan waa la damaanad qaadayaa, waxaana suurtagal ah in la qaado sanadkiiba dhowr jeer.
Maanta waxaan ka hadli doonaa mawduuca soo socda - basbaaska kulul: sii kordhaya miraha, goorta la beero iyo sida loo daryeelo geedo?
Noocyada xulashada ee guriga iyo lagu koriyo
Waa warshad dilka ah oo leh bushar is haysta, caleenta madaxtooyada iyo miraha dhalaalaya. Basbaaska waxaa lagu kori karaa guri dabaq ah ama aqalka dhirta lagu koriyo. Noocyada qaar waxay ku haboon yihiin dhulka furan.
Breeders ka saartey noocyo badan, oo ku kala duwan ee nuances dhadhan iyo size miro, dhalid, heerka of Bisaylkiisa. Marka aad joogtid guriga, marar badan oo noocyo kala duwan ah iyo noocyada beeraha ee Dutch, Polish ama Ruush.
Noocyo basbaas kulul beerista guriga:
Mucjiso yar - kala duwan ee taranta Dutch, ku habboon beerashada guriga. Miro badan, miro yar yar, oranji, casaan ama jaalle ah. Dhadhanka waa fiiqan, laakiin jilicsan, oo ku haboon suugada.
Dufanka cas ee - kala duwanaanshaha xulashada Ruushka. Baasaboor ku filan waa mid si weyn loogu daboolay miro waaweyn oo khudrad ah oo ku habboon caanaha. Waxaa suurtogal ah in koraan labadaba aqalka dhirta lagu koriyo, iyo dhul furan.
Astrakhan - Kala duwan Ruushka, oo lagu sifeeyo dhalidda sare. Dhirta iswada leh waxay bixiyaan miraha casaan yar oo casaan leh oo leh dhadhan aan caadi aheyn. Waxaa loo isticmaalaa sameynta tinctures iyo suugada.
Ukran si cad - baadiyaha yar yar, oo si fiican u koraya aqalka dhirta lagu koriyo ama dheriga. Miraha waa dhaadheer iyo dhuuban, oo leh dhadhan gubanaysa.
Alaab - kala duwan oo dhexdhexaad ah. Miraha waa guduud cas, dheer, aad u casiir leh. Cunno badan ayaa loo isticmaalaa karinta. Beerka beeraha oo doorbidaya.
Jalapeno - Basbaaska qafiifka ah, oo caan ku ah Cunto-American oo caan ah, ayaa leh midab yar oo guduudan ama cagaaran. Dhadku waa mid dhexdhexaad ah, la aqoonsan karo. Miraha waa la keydiyay, noocyo kala duwan ayaa midho leh.
Ka dib markii la doorto noocyada kala duwan, waxaan ku sharxi doonaa sida loo abuuro basbaas qadhaadh abuurka ah guriga?
Basbaas kulul waxay u baahan tahay carrada iftiin leh acidity dhexdhexaad ah. Iskeelka ugu fiican wuxuu ka kooban yahay ciidda hore ee carrada, peat iyo ciid la dhaqay.. Waxaad isticmaali kartaa oo iibsan kartaa isku dar ah ciidda, taas oo ku daray humus.
Madaarka aan jeclayn ciidda cufan, dheecaan wanaagsan ayaa lagama maarmaan u ah korniinka guuleysta, ka takhalusidda joogitaanka qoyaanka.
The geedo of basbaas qadhaadh: beerashada iyo daryeelka. Abuur abuurka u baahan tahay February. Ka hor inta beero, waxay kala soocaan, xulashada madhan iyo fool xun. Si aad u dardar geliso biqilka iyo xoojinta miraha waxaa lagu qooyay xalka auctous ee kiciya kicinta muddo 10-12 saacadood. Taas ka dib, abuurku waa la dhaqaa oo ku duudduubay faashad qoyan si ay u bararto.
Baako caag ah ama caag ah ayaa si fiican loo dhaqay oo la kariyey. Dheecaan ayaa la dhigayaa xagga hoose: shafka jajaban, dhagaxyada webiga ama dhoobo ballaariyey. Dhulku wuxuu ku shubmaa dusha sare wuxuuna ku waraabiyaa biyo badan oo kulul. Marka ciidda ay qaboojiso, godadka waxaa lagu sameeyaa in ka badan 1.5 cm qoto dheer.
Abuur kasta waxaa la dhigaa oo ku rusheeyaa dhulka. Weelka waxaa lagu xiray filim waxaana lagu dhejiyaa meel diiran oo wanaagsan. Madaarka waxaa lagu beeray dheriyo peat ah oo lagu rakibay digsi qoto dheer.
Sprouts waxay soo baxaan hal usbuuc kaddib marka la beero. Waxay u baahan yihiin in si taxaddar leh loo baaro, kuwa daciifka ah laga saari karaa, si aanay u faragelin horumarinta geedo rajo leh. Iyada oo habkan loo maro, wax loo baahan yahay ma jirto. Marka dhirta dhalinyaradu u fidaan ilaa 20 cm, sare ee jiido kasta si tartiib ah si ay u kiciyaan horumarinta caleemaha lateral.
Beerta qaar waxay door bidaan in ay beeraan gawaarida qadhaadh ee xilliga dayrta si ay u helaan faraca badan ee guga.
Xulashada ugu wanaagsani waxay tahay in la isku daro hababkan iyagoo beeraya miraha 2-3 jeer sanadkii. Qalabkan noocan oo kale ah wuxuu gacan ka geysan doonaa sidii loo abuuri lahaa beer yar yar oo ka mid ah fruiting joogto ah iyo siin doonaa fursad ay isku dayaan noocyo rajo cusub.
Geedo loogu talagalay koriyo
Qorsheynta si ay u koraan basbaaska ee lagu koriyo, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso ciidda bacrin ah horay loo sii faafiyo. Wixii lagu koriyo, geedo kulul khafiif ah ayaa ku habboon dheriga peat, iyadu waxay u fiican tahay caadifad iyo ficil ahaanba ma jiran.
Qaadista waa la sameeyaa marka dhulka uu diirimaad ku filan yahay, badanaa waxay dhacdaa xilliga guga dambe. Qalabka aqalka dhirta oo si joogto ah loo kululeeyo sanadka oo dhan, dhirta waxaa lagu beeray waqti kasta oo habboon.
Sida loo kala saaro geedo laga bilaabo basbaas kulul macaan? Beerta qaar ayaa doorbidaya in aysan korin geedahooda, laakiin si ay ugu iibsadaan suuqa ama xannaanooyinka. Si aan u jahwareerin geedo casaan kulul leh geedo macaan, waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh u tixgeliso dhirta. Dhibaatada dhirbaaxada leh ee qallafsan, iyo caleemaha horeba.
The weyn ee geedo, farqiga la ogaan karo farqiga u noqonayaa. Waxaad si fudud u qaniinaysaa caleenka dhirta. Bariisiga cagaaran wuxuu leeyahay dabacsan, wax yar oo dhadhan ah.
Saaxiibka khibrada leh kuma talinayaan in la geliyo basbaaska kuleylka ah iyo macaan.. Waa suurtogal in la miiro iyo labada noocba waxay luminayaan dhadhanka. Markaad beerto dhirta lagu koriyo, waxaad dhigtaa meel ka fog midba midka kale ee suurtogalka ah, oo si wanaagsan u kala saar qaybaha.
Koraaya geedo qasay basbaas kulul guriga
Waxaan ku sharxi faahfaahin sida loo koro geedo qadhaadh qadhaadh ah guriga?
Geedaha koray ee basbaaska qolka waxaa loo wareejiyaa dheriyada dhoobada ah ama dhar balaastig ah. Dhererka udhexaadka ah waa 40-50 cm Dhiig ayaa la dhigayaa meesha ugu hooseysa taangiyada, dhirta waxaa loo wareejiyaa meel cusub iyadoo loo marayo isku dhoofinta.
Waa muhiim Ha ku dhibin xididdada jilicsan, waxaa laga yaabaa inay dib u dhigto horumarka sii kordhaya ee baadiyaha iyo yareeya beergooyska mustaqbalka.
Baasaboorka la jeexay wuxuu jecel yahay iftiin fiican, diirimaad diiran oo dhexdhexaad ah.. Dheriga waa in lagu dhejiyaa guntia, baalsho qurxin leh ama xayiraado daaqad.
Maalin iftiin ah ugu yaraan 12 saacadood waa suurad wacan, sidaas awgeed xilliga jiilaalka iyo dayrta waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo nalal dheeraad ah.
In penumbra, ayaa afkoda ayaa la kala fidiyey, ugxan-abuurka ah ayaa loo sameeyay si liidata iyo dhici karto. Si xajin fiican, waxaad si joogto ah uga saari kartaa caleemaha lateral.
Biyaha warshaduhu waa inay noqdaan biyo jilicsan heerkulka qolka, 2 jeer toddobaadkii. Waxaa la doorbidi karaa in lagu waraabiyo balaastarka, laakiin ka hor inta aan la isticmaalin bacriminta waa lagama maarmaan in la qoyo qolka dhulka hoostiisa. Hawada cusub waxay faa'iido u leedahay basbaaska, qolalka dhererka la dhigo waa in la duubaa inta badanna ciidda dheriga waa in si joogto ah loo daboolaa.
Gawaarida qashinka ah waxay jecel yihiin carrada nafaqada leh. Inta lagu jiro muddada koritaanka firfircoon ee firfircooni kasta 2 toddobaad walba, xalalka aqueous ee Bacriminta ayaa lagu dabaqayaa dheriyada.. Superphosphate, potassium sulfate iyo ash ayaa la doorbidayaa, iyo dhismayaasha caalamiga ah si fiican u shaqeeyaan (Kemira iyo kuwo kale).
Wixii fruiting guul leh waxaa lagama maarmaan ah si loo ilaaliyo heerkul deggan. Habka ugu fiican - 22 digrii maalintii oo aan ka yareyn 17 habeenkii. Pepper uma dulqaadan karo xitaa dhaxan waqti gaaban, kuleylka kuleylka ee xagaaga ayaa sidoo kale u dhib badan isaga. Muddadii xilliga geedo qorrax leh oo firfircooni ah ayaa lagu taliyaa pritenyat.
Kordhinta waxsoosaarku waxay ku caawinaysaa wakhtiga qunyar socodka. On baadiyaha 1-2 waa ka baxsaday baxsashada ugu xooggan, inta hartay waxaa laga saaray. Xidhanka la soo dhajiyay ayaa u muuqda dhexdhexaad, geedka ma isticmaali karo xoogaa cagaaran, oo diiradda saaraya ugxan-yari. Si xasillooni weyn u noqoto, astaamaha jilicsan waxaa lagu xiri karaa taageero.
Si loo kordhiyo tirada ugxan-yari waxay si joogto ah u caawineysaa in ay ku buufiso baadiyaha iyadoo xalka aqueous of succinic acid.
Basbaasku wuxuu iska leh dalag isku mid ah, laakiin beeraley badan ayaa doorbidaya in ay kiciyaan pollination by si joogto ah u ruxin dheriga ama xoqin dhuxulo suufka.
In hawada qallalan iyo diiran ee guryaha, dhirta waxaa lagu saari karaa caarada caarada. Si looga hortago dhirta iyo hawada ku wareegsan waa in si joogto ah loo buufiyaa biyo diirran. Markii ay heleen kabaha, dhirta ay saameeyeen waxaa lagu daaweeyaa xalal aqueous of cayayaanka. U yeelay baadiyaha si fiican u samee qol gaar ah. Daaweynta waxaa la sameeyaa ilaa dhamaadka cayayaanka.
Harvest waxay noqon kartaa si tartiib tartiib ah, diiradda saaraan farsamooyinka farsamada ee midhaha.
Kuwa raba in ay helaan miraha tayo leh, waxaad u baahan tahay inaad doorato dhawr basbeed oo iyaga ka baxa baadiyaha ilaa ay ka buuxaan bisil. Abuurka abuuray waxay ku habboon yihiin beeridda 3 sano kadib goosashada.
Ka dib dhammaadka fruiting, duurka udgoon ayaa la jarjarey qeybtii iyo transplanted galay dhulka cusub. Ka dibna baadiyaha u dhaqaaqa meel wanaagsan oo iftiin leh (koonfurta ama daaqadda koonfur). Waraabinta waxay kordhisaa kaddib marka ay firfircoonaadaan caleemaha cusub. Iyadoo marin habboon oo sanadka la leh hal baadiyaha waxaad heli kartaa saddex dalag oo ah basbaaska kulul.
Laga bilaabo beerista basbaaska kuleylka ah ee guriga, waxaad ku diyaarsan kartaa guriga aqalka dhirta lagu koriyo. Marka la beero noocyo cusub, waxaa habboon in la isku dayo in ay ka gudubto, gaarista natiijooyin xiiso leh. Uruurinta abuurka, waxaad ku hagaajin kartaa natiijooyinka tijaabada iyo xitaa waxaad heleysaa qalabka isboortiga ee xiisaha leh.
Caawin! Baro hababka kala duwan ee basbaaska sii kordhaya: kiniinnada peat, dhulka furan iyo xitaa waraaqda musqusha. Baro qaabka qaniinyada abuurista ee dabka, iyo sidoo kale cudurada iyo cayayaanka ay weerari karaan geedahaaga?
Sidee u koraan digir basbaaska madow, miro ah, guriga macaan?
Sababaha ugu muhiimsan ee caleemaha loo rogay caleemaha, geedo way dhacaan ama fidiyaan.